पैसा बचतकाे लागी यी दैनिक साधारण बानीहरू अपनाउनुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
पैसा सबथाेक हाेइन । तर, आफ्नाे दैनिक जिवन निर्वाह गर्न र आफ्ना सपनाहरूलाइ आकार दिन पैसाकाे आवश्यकता पर्छ । आफुसँग भएकाे बेलामा खर्च गर्दा र समय आउँदा टर्छ भन्रे बानीले हामीलाइ आवश्यक परेकाे बेलामा आर्थिक अभावमा डुब्छाैँ । त्यसैले यहाँ पैसा बचत गर्ने बानीकाे विकासकाे लागी केही सामान्य उपायहरू उल्लेख गरिएकाे छः
Don't Miss it के तपाइ स्मार्ट हुनुहुन्छ ? यस्ताे हुन्छ स्मार्ट व्याक्तिकाे बानी ? जान्रुहाेस्
Up Next हामीले जीवनमा स्विकार्नै पर्ने सत्यहरू यस्ता छन्, जान्रुहाेस्